Bernardo Silva oo ka jawaab celiyay in Cristiano Ronaldo ay isku arkaan wareega 8-aad Champion-ka | Bakool.net
Home / CAYAARAHA / Bernardo Silva oo ka jawaab celiyay in Cristiano Ronaldo ay isku arkaan wareega 8-aad Champion-ka
Kubad sameeyaha kooxda Man City Bernardo Silva ayaa wax laga weydiiyay isku aadka Champion-ka wareega 8-aad oo berito la sameenayo ayadoo City ogaan doonto kooxda ay ku aadi doonto.
Haddaba Silva waxaa wax laga weydiiyay inuu jeclaan lahaa in kooxdiisa Man City lagu aadiyo Juventus oo uu hogaamiye u yahay Cristiano Ronaldo kaasi oo sedexleey caan ah todobaadkan ka dhaliyay kooxda Atletico Madrid.
Silva wuxuu yir “Haddii aan si daacadnimo ku dheehan u hadlo ma jeclaan laheyn inaan Cristiano Ronaldo iska hor imaano kooxda Juve wareega 8-aad Champion-ka, waana ogahay awooda uu Ronaldo u leeyahay sameynta waxyaabo lama filaan ah madaama uu yahay laacib dhameestiran.”
Silva oo hadalkiisa sii wato wuxuu yiri “Marxaladahan oo kale haddii lasoo gaaro Champion-ka waxaa wanaagsan in awoodaada aad ku tashatid lana cayaartid kooxaha awooda badan laakiin aniga si gaar ah ma rabo saaxiibkeyga Ronaldo inaan xiligaan dagaal wada galno waayo Juve sida aan koobka ugu baahanahay ka badan ayay ugu baahan yihiin.”
Previous: Japan oo Soomaaliya ka taageeraysa ka hortagga Qaraxyadda
Next: Maxaad ugu Baahan tahay inaad ka ogaato isku aadka Quatra finalka champions league !?